I-SEASALT-Hlala kwiSimbo kuMgangatho oPhezulu we-128 m2 ngeembono - I-Airbnb
I-SEASALT-Hlala kwiSimbo kuMgangatho oPhezulu we-128 m2 ngeembono
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLeanne And Paul
ULeanne And Paul yi-Superhost
Umgangatho oPhezulu wekhaya lolwandle lwanamhlanje eliziqulathe ngokwalo ngokungena kwabucala. Igumbi lokulala elikhulu elinendawo yokuhlambela ye-spa, ishawa, ukuhamba ngengubo, indlu yangasese eyahlukileyo. Vula iplani yokutyela kunye negumbi lokuphumla. Idesika ebanzi ilungele ukuphumla kunye nemibono etshayelayo yolwandle lwaseAgnes Water. Ikhitshi linefriji/isikhenkcezisi esikhulu, i-oveni, izitya, izinto zokucheba njl.njl. Ukwabelana ngempahla egaraji. Ibiyelwe ngokupheleleyo kunye negadi engasemva enendawo yokuzonwabisa emnandi enePool. Ikhuselekile kwindawo yokupaka ezitalatweni. Hamba uye kwiivenkile, ulwandle, iiCafes & pub.
Ikhaya laselwandle eliStylish lanamhlanje likwindawo entle yokuhamba umgama ukuya elunxwemeni lolwandle, iivenkile kunye neekhefi, kwindawo ezolileyo yesangqa sesangqa. Ipropathi inemibono ebanzi yeAgnes Beach ukuya ku-1770. Indawo entle yokubuyela emva kosuku elunxwemeni. Ukuphumla kakhulu kwaye kunoxolo, iigadi ezintle ezenziwe nge-manicure ezinedama kunye nendawo yokuzonwabisa.
4.96 · Izimvo eziyi-222
Eyona Mfihlo igcinwe nguAgnes Water.
Njengomkhenkethi onamava ndingakuqinisekisa ukuba uya konwaba ngakumbi ngokukhetha iSeasalt kwindawo yakho yokuhlala. Yindawo entle yokuhlala enesitayile, i-125m2 yendawo yomgangatho kunye nekhitshi elilungele umpheki. Ijikelezwe ziigadi ezenziwe ngobuchule kwaye yonke ifestile inolwandle, intaba okanye iimbono zegadi.
Umbuki zindwendwe ngu- Leanne And Paul
Siya kuba kwisiza ngayo nayiphi na imibuzo, iingcebiso kunye noncedo olunokuthi lufunwe. Sinxibelelana neendwendwe ukuba ziyafuneka, kungenjalo sithanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo bazo.